Daawo Sawirada Wiil Soomaali ah oo loo aqoonsaday Halyeygii howlgalkii Westgate kadib markii uu dad badan badbaadiyey | Salaan Media
Daawo Sawirada Wiil Soomaali ah oo loo aqoonsaday Halyeygii howlgalkii Westgate kadib markii uu dad badan badbaadiyey
Abdul Yuusuf Xaji oo ah wiil uu dhalay wasiirkii hore ee gaashaandhiga Kenya ee lahaa amarka ay ciidanka Kenya ku galeen dalka Soomaaliya ayaa waxaa uu noqday ninkii ugu muhiimsanaa howlgalkii dad badan looga badbaadiyey dhibkii Westgate.
Abdul Xaji ayaa waxaa la soo bandhigay sawiro badan isaga oo khatar noloshiisa u geliyey dagaal adeg oo uu la galay kooxdaasi Al-Shabaab isaga oo aan xitaa cidna amar uga sugin inuu howshaasi galo.
Waxa uu sheegay in marka dhibka uu dhacay uu joogay YAYA balse telefon usoo dhacay loogu sheegay in Westage la weeraray waliba uu walaalkiis la dhashay halkaasi ku jiro.
Arintaasi oo ku dhalisay inuu u qalabqaato sidii uu walaalkiis usoo badbaadin lahaa. Laakiin culeyska uu is badelay markii uu arkay dad ka badan walaalkiis oo badbaado u baahan.
Dadweynaha Kenya iyo dowladooda ayaa u aqoonsaday inuu Abdul Xaji noqday halyeyga iyo geesiga howlgalkii laga galay kooxdii xagjirka ah ee Al-Shabaab. Waxaana uu la yimid mas’uuliyad uu isaga saaray.
Waxaa wareysi uu siiyey NTV ayuu waxaa uu ku beeniyey warar badan oo la qoray xilliga uu howlgalka uu ku jiray kuwaasi oo ah inuu ku geeriyoday howlgalkaasi. Balse xilligaasi uusan rabin inuu ka jawaabo hadalada dadka lagu niyad jabinayey, sababtoo ah dagaal sirdoon oo aan war badan u baahneyn ayaan ku jiray ayuu yiri.
Dhinaca kale wareysiga uu bixiyey ayuu ku sheegay inuu Aabihii ahaa qofka baray isaga iyo walaalkiisba qaabka ciidan ahaan nolosha dadka iyo midiisaba uu u badbaadsan lahaa. Waxaana uu ku tilmaamay tababarka uu aaabihiis siiyey midka heerkan soo gaadhsiiyey.
Mar la weydiiyey inuu isku arko HEROES sida dad badan u aqoonsadeen inta uu socday howlgalkii Westgate oo uu sameeyey dadaalo aysan sameyn ciidanka kale ee Kenya iyo kuwa kalaba. Laakiin isaga taasi waa uu diiday waxaan uu sheegay inuu isku arko nin sameeyey wixii ay sameyn lahaayeen qofkasta oo badbaadinaya waxa waajibka ku ah ee nafta bini’aadamka.
Waxa uu weerar xoogan ku qaaday kooxda Al-Shabaab iyo Warbaahinta inta uu howlgalkan socday dadka wareeriyey. Al-Shabaab ayuu waxa uu ku diiday fikirkooda xun ee ah inay weerarka Westgate ku sheegay inuu yahay mid jihaad, isagoona sheegay inuusan kaasi jihaad aheyn oo uu yahay mid hareer marsan.
Diinta Islaamka ayuu ku sheegay inaysan aheyn mida disha carurta,haweenka, dadka rayidka ah iyo kuwa aanba kaa galabsan, waxaana uu sheegay in jihadka uu leeyahay shuruudo ka duwan mida ay Al-Shabaab u heysato.
Si taasi la mid ah waxa uu weeraray warbaahinta dadka ku wareeriyey in weerarka Westgate dadka loo kala saarayey Islaam iyo gaalo, wixii islaam ahna la siideynayey, halka kuwa gaalada ahna la dilayey.
” Waa been laga badbadiyey inay islaam iyo gaalo hadaf la yiraahdo ku shaqeynayen kooxdaasi argagixisada ah. Waxaa aniga aan indhaheyga soo saaray inay dileen dad badan oo islaam ah, si taasi la mid ah ayey dad aan islaam aheyna u dileen. Marka ma qabo in dadka been loo sheego oo ragaasi fikirka qaldan heysan dartood colaad loogu sameeyo islaamka. Waxaana sidoo kale diidanahay in la qariyo dad la dilay oo gacantooda ku baxay in islaanimadooda laga qaado’ ayuu yiri. Waxaana uu intaasi ku sii daray.
” Soomaalida waxaa ay yihiin Islaam 100%100 waxaa maalinkasta dila oo weerar ku haya kooxdan Al-Shabaab. Marka bal ii sheega islaanimada kuwaasi lagu dayn waayey ee lagu deynayo kuwa ku jiray Westgate meesha ay ka timid?. Waxaan u arkaa midaasi dacaayad aan jirin. Ma naxayaan aan qofka dhaafeyn ayey ahaayeen raga aan howlgalka ku sifeynay” ayuu yiri Abdul Xaji oo noqday geesi Soomaaliyeed oo magac usoo jiiday Soomaalida Kenya iyo islaamka dalkaasi deganba.
Abdul Xaji oo aabihiis ahaa wasiirkii gaashaandhiga Kenya ee dowladii hore ayaa waxaa iminka uu sheegay inuu noloshiisa iyo wajigiisa qatar badan u geliyey badbaadinta naf badan oo aan waxba galabsan. Balse uu farxad u arko shaqada uu qabtay.